Madaxweynaha maamulka Puntland oo Maanta tegay Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha maamulka Puntland oo Maanta tegay Gaalkacyo
Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Maanta gaaray Waqooyiga Magaalad Gaalkacyo, ee Xarunta Gobolka Mudug, iyadanoo siweyn halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxaa Madaxweyne Deni kusoo dhaweeyay Xubno ka tirsan labada Golle ee Maamulka Magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland oo maalmihii la soo dhaafay safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa ujeedka safarkiisa Magaalada Gaalkacyo waxaa lagu sheegay xarig jarka Garoonka Kubbada Cagta Cawaale oo hab casri ah loo dhisay.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa kulamo kala duwan uu la qaadan doonaa Maamulka iyo Odayaasha dhaqanka Magaalada Gaalkacyo, isaga oo sidoo kale kormeer ku ku tegi doono dhismaha dekedda Garacad.
Bulshada Rayidka oo dalbatay in xal Sharci ah loo helo Qoyska Ikraan Tahliil.
NISA oo shaacisay in uu Maanta xilka la wareegay Agaasimaha uu u Magacaabay madaxweeneFarmaajo